1.အလိုအလျှောက်ဆန်စက်ပစ္စည်းစွမ်းရည်:1500~ 2000kg / h
40T / D အလိုအလျောက်ဆန်စက်စက်၏ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်
ဤအလိုအလျှောက်ဆန်စက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်ပြီးအရည်အသွေးမြင့်ဆန်ကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်, ပြည့်စုံသောဆန်ကြိတ်ခွဲစက်သည်အဆင့် ၁ စံဆန်ကိုထုတ်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးကိရိယာဖြစ်သည်, အဆင့် II စံဆန် , အထူးနှင့်ဒဏ်ငွေသန့်ရှင်းရေးဆန်. ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူထုတ်ကုန်များ၏မိသားစု, ဖြစ်စဉ်ကိုစွမ်းဆောင်ရည်တည်ငြိမ်သည်, ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်အကြမ်းခံ, တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်, အနိမ့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု, လွယ်ကူခြင်းနှင့်ဒါပေါ်စစ်ဆင်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု. ဤအပြည့်အဝအလိုအလျောက်ဆန်စက်သည်အလယ်အလတ်နှင့်အကြီးစားဆန်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံအတွက်စံပြကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည် ဆန်စက်စက်ရုံ သင့်ရွေးချယ်မှုအတွက်.
1.အလိုအလျောက်ဆန်ကြိတ်ခွဲစက်သည်စပါးစေ့မှထည်များနှင့်ဖွဲနုများကိုဖယ်ထုတ်ပြီးစပါးထွက်ရှိရန်ထုတ်လုပ်သည်. ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းပုံ, အဆင်ပြေသောစစ်ဆင်ရေး, သေးငယ်တဲ့အလုပ်အကိုင်areaရိယာ, အနိမ့်ပါဝါစားသုံးမှု, ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တို, မြင့်မားသောအလုပ်ထိရောက်မှု, စပါးအပြောင်းအလဲနဲ့၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချ, ပြည့်စုံသောဆန်ကြိတ်ခွဲစက်သည်ပြည့်စုံသောဆန်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ဖြစ်သည်.
2.ဤအပြည့်အဝအလိုအလျောက်ဆန်ကြိတ်ခွဲစက်သည်စပါးကိုအမျိုးသားအဆင့်ဆန်သို့အဆင့်တစ်မျိုးတည်းဖြင့်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်. Automatci ဆန်စက်သည်ဆန်ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်. စက်တစ်ခုနှင့်စက်ရုံ၏စွမ်းရည်ကိုသင်၏အထူးလိုအပ်ချက်များအရစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်. ထို့ကြောင့်ပြည့်စုံသောဆန်စက်ရုံသည်စပါးဖြန့်ဝေရေးစခန်းအတွက်အကောင်းဆုံးစံချိန်တင်စက်ကိရိယာဖြစ်သည်, တောင်တန်းဒေသ, လယ်ယာအဖြစ် Self- န်ထမ်း.
3.ဒီဆန်စက်ကြိတ်ကိုဓာတ်လှေကားများနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်, တုန်ခါမှုသန့်စင်, de-stoner, မင်္ဂလာပါ, စပါးခွဲစက်,ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားပစ်, ၎င်းသည်လက်တွေ့ကျပြီးဂေဟစနစ်ဖော်ရွေသည်,ပြီးပြည့်စုံသောဆန်ကြိတ်ခွဲမှုလိုင်းသည်အညစ်အကြေးများနှင့်ကျောက်များကိုဖယ်ရှားပေးသည်.
4.အလိုအလျောက်ဆန်စက်သည်ကျစ်လစ်ပြီးကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည်. အလိုအလျောက်ဆန်ကြိတ်ခွဲမှုလိုင်းသည်လည်ပတ်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်အဆင်ပြေသည်, အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအာကာသချွေတာ,ဝယ်ယူသူများလိုအပ်ချက်အရတပ်ဆင်ခြင်းကိုသံမဏိကိုယ်ထည်လည်ပတ်မှုပလက်ဖောင်းသို့မဟုတ်ကွန်ကရစ်ပြားပေါ်တွင်အခြေခံနိုင်သည်.
5.ဆန် အရောင် sorter စက် နှင့် ဆန်ထုပ်ပိုးစက် optional ကိုဖြစ်ကြသည်,ငါတို့သည်သင်တို့၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီစက်ရုံစျေးနှုန်းနှင့်အတူလိုက်ဖက်နိုင်ပါတယ် .
စပါးကျောက်တုံး 1 ယူနစ်
စပါးတွင်း 1 ယူနစ်
ဆွဲငင်အားခွဲထုတ် 1 ယူနစ်
ဆန်စက်3ယူနစ်
ဆန်တနျး 1 ယူနစ်
ဓာတ်လှေကား6ယူနစ်
လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်မှုကက်ဘိနက် 1 ယူနစ်
စွမ်းရည်: 1.5 တန်ချိန် ~ ၂ တန် / ဇ
ရလဒ် :1500~ 2000kg / h
နံပါတ်&ပစ္စည်း ရုပ်ပုံများ မော်ဒယ် ပါဝါ
(kw) ရေတွက် မှတ်စု
ရေပုံးဓာတ်လှေကား DTG26 /51.5 1 ဦး ခေါင်းနှင့်အောက်ခြေ .03.0, စပါးအစာကျွေးဖို့အလယ်ပိုင်းပိုက်မြစ်ဝကျွန်းပေါ် 1.8
ဆန်စက်နှင့်သန့်ရှင်းရေး TXC15 3+0.5+0.5 1 စပါးသန့်ရှင်းရေးနှုန်း≥98%
ရေပုံးဓာတ်လှေကား DTG26 / 4.2 1.5 1 ဦး ခေါင်းနှင့်အောက်ခြေ .03.0, အလယ်ပိုင်းပိုက်မြစ်ဝကျွန်းပေါ် 1.8, သန့်ရှင်းသောစပါးကျွေးမွေးသည်
စပါးတွင်း MLGT25 5.5 1 ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲထိန်းချုပ်မှု,စပါးထည်အဘို့
ရေပုံးဓာတ်လှေကား DTG26 / 4.2 1.5 1 ဦး ခေါင်းနှင့်အောက်ခြေ .03.0, အလယ်ပိုင်းပိုက်မြစ်ဝကျွန်းပေါ် 1.8
စပါးသီးခြား MAC100 *51.1 1 GB တန်း, လှုံ့ဆျောပြောင်းလဲနေသောချိန်ခွင်လျှာစမ်းသပ်မှု,ထည်ဆန် srceen နှင့် sperating သည်
ရေပုံးဓာတ်လှေကား DTG26 / 4.2 1.5 1 ဦး ခေါင်းနှင့်အောက်ခြေ .03.0, အလယ်ပိုင်းပိုက်မြစ်ဝကျွန်းပေါ် 1.8, သန့်ရှင်းသောဆန်အစာကျွေးခြင်းအဘို့
ဆန်စက်စက် N150 18.5 1 ထည်ဆန်ကြိတ်ခွဲသည်
ထွန်းစက် N110 152ဆန်ကြိတ်ခွဲရန်အတွက်
ရေပုံးဓာတ်လှေကား DTG26 / 4.2 1.5 1 ဦး ခေါင်းနှင့်အောက်ခြေ .03.0, အလယ်ပိုင်းပိုက်မြစ်ဝကျွန်းပေါ် 1.8, ဆန်စစ်ဆန်စက်သို့ဆန်ကြိတ်ခွဲပါ
ဆန်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်စက် MMJP80 *31.1 1 ဆန်ဖြူအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတွက်
နှင့်အတူ3အတန်း
ရေပုံးဓာတ်လှေကား DTG26 /51.5 1 ဦး ခေါင်းနှင့်အောက်ခြေ .03.0, ဆန်ဖြူနို့တိုက်ကျွေးရေးအတွက်ပိုက်ပိုက် ၁.၈ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်
ဆန်အရောင် sorter စက် 6XSM128 1.5 1 ဆန်အရောင်ခွဲခြင်း
အလိုအလျောက်အထုပ်စက် DCS25 0.37
0.37 1 ဆန်ထုပ်ပိုး
1~ 25kg / အိတ်
ပစ္စည်း နာမည် မော်ဒယ် ပါဝါ
/ ပါဝါဖြန့်ဖြူး / / / တပြင်လုံးကိုအပြောင်းအလဲနဲ့လိုင်းထိန်းချုပ်မှုသည်
/ အရန်ပစ္စည်းများ / / / Frame ,ဆေးသုတ်သည်,ကေဘယ်လ်
စုစုပေါင်းပမာဏ 17 သတ်မှတ်ချက်များ 73.49KW
40T / D အလိုအလျောက်ဆန်စက်စက်ရုံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ